5 Uru & Ndụmọdụ
Tọzdee, Disemba 6, 2011 Tọzdee, Disemba 6, 2011 Jenn Lisak Golding
Izu a, anyị jụrụ ndị ọbịa anyị na-eji Zoomerang ma ọ bụrụ na ha ga-azụta ọdịnaya iji gbakwunye blog ha ma ọ bụ weebụsaịtị:
30% kwuru Mbanụ! Nke ahụ abụghị eziokwu!
30% kwuru na ha nwere ike ịzụta ụfọdụ nnyocha ma ọ bụ data
40% kwuru na ha ga-azụta content
Ezie na m na-aghọta oge azụ ịzụta mpụga ọdịnaya, anyị ahụwo ụfọdụ ezigbo nsonaazụ na ndị ahịa anyị DK New Media. Oge ụfọdụ, ọ kacha mma iche maka ịzụta ọdịnaya dị na mpụga dị ka ịnye ndị ọrụ ngo. You nwere ike iku onye ga - enyere gị aka na Mgbasa Ozi Paykwụ Clickgwọ Gị (PPC)? Gini mere ị gaghị ewe onye ọrụ iji nyere gị aka ị nweta ọdịnaya gị? Nke a bụ ụfọdụ uru na ndụmọdụ mgbe ị na-eji ọdịnaya mpụga:
1. Zụrụ ọdịnaya na-azọpụta gị oge!
Imirikiti n'ime anyị juputara na ozi ịntanetị, ọrụ, na ebumnuche ahịa ndị ọzọ n'oge ụbọchị ọrụ. Site na ịpụta ọdịnaya, ọ na-enye gị ohere ilekwasị anya na ọrụ ndị ọzọ na ebumnuche gị dị ka ahịa. Ọzọkwa, na ahụmịhe anyị, ntụgharị nke ọdịnaya dị oke ọsọ, ma ka mma, na-azọpụta gị iwepụta oge iji nyochaa isiokwu ụfọdụ, nke nwere ike iwe ogologo oge karịa ịde blọgụ ma ọ bụ ọdịnaya ahụ n'ezie!
2. contentzụta ọdịnaya kwesịrị kachasị maka ọchụchọ.
Otu ebumnuche bụ isi nke ọdịnaya bụ inyere gị aka na mbọ njikarịcha njin ọchụchọ gị. Imirikiti ndị na-edepụta ọdịnaya nwere nghọta dị mfe, ma ọ bụrụ na ọ bụghị elu, nghọta ntinye isiokwu, njikarịcha saịtị dị mfe, na mkpado meta dị mkpa. Inwe ederede ederede nke ọma na isiokwu blọgụ ma ọ bụ webụsaịtị gị na-aga ogologo oge iji ruo ebumnuche ọchụchọ gị.
* M ga-akwado mgbe ị na-achọ ndị edemede ọdịnaya iji jide n'aka na nghọta SEO bụ akụkụ nke ọrụ ha. Buru n'uche na ị ga-adị njikere-ezitekwara gị ezubere iche Keywords ka ọdịnaya dere iji hụ na ọdịnaya ọchụchọ.
3. Debe atụmanya doro anya mgbe ịzụrụ ọdịnaya.
Mgbe ị na-achọ onye ode akwụkwọ edemede, gbaa mbọ hụ na ị doro anya gbasara ihe ị na-atụ anya ya na ụdị ọdịnaya ịchọrọ na saịtị gị. Ọzọkwa, dee nkọwa zuru ezu dị ka o kwere mee mgbe gị na ha na-ekwurịta okwu. Ọ bụrụ n ’ịtụ anya inwe akwụkwọ blọgụ gị site na elekere 5 nke ụtụtụ na Fraịde, tinyezie atụmanya ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ọdịnaya gị bụrụ ebumnuche kama ichebe gị, jide n’aka na nke ahụ doro anya.
Enwekwara ọdịnaya dị iche iche. Gbaa mbọ hụ mgbe gị na ndị dere ọdịnaya na - ekwu okwu, na ị doro anya n’ọdịmma ị na - atụ anya dabere n’ọgụgụ gị.
4. Nye nzaghachi na ọdịnaya niile ịzụrụ.
Ọbụna obere mgbanwe nwere ike ịpụta ụwa dị iche. Mgbe onye dere ọdịnaya nyefere post maka nyocha gị, gbaa mbọ weghachite mgbanwe gị mgbe ịmechara ka ha nwee ike nyochaa ma hụ ihe ị gbanwere. Iji maa atụ, ị nwere ike ịhọrọ isi mgbo mgbe onye edemede ọdịnaya jiri akara. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị chọghị mgbe ọdịnaya jiri okwu "gị" ma ọ bụ "M," mee ka ha mara.
5. Nye ndị na-ede ọdịnaya iji nweta akụkọ.
Dika ọdịnaya di na saiti gi, nye ndi edemede gi ihe onu ogugu na nchịkọta na mpempe ọdịnaya ọ bụla ha nyere. Oge ụfọdụ, ụzọ kachasị mfe iji gwa onye dere ọdịnaya nke ọdịnaya kachasị dị mma bụ igosi ha nsonaazụ. Wayzọ a, ha nwere ike ịlele anya ọdịnaya ha nyere wee hụ otu ha ga - esi gbasata usoro ma ọ bụ ederede ederede na mpempe akwụkwọ ndị ọzọ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ala azụ, were na-amaba! Maghị ruo mgbe ịnwale, nri?
Tags: content Marketingndị dere ọdịnayaihe ederedeọdịnaya dị na mpụgazụrụ ọdịnayaịzụta ọdịnayazoomerang
Ọnụ nke Facebook Marketing
Dec 6, 2011 na 10:37 PM
Otu onye gosiri m ihe otu oge… ya kpamkpam gbanwere obi m.
Onye isi ala Obama nwere onye na-ekwu okwu. Onye isi oche nwere ike ịbụ otu n'ime ndị ọkà okwu kachasị mma anyị nwere na akụkọ ntolite - na-akpali akpali, na-eche echiche ma na-agwụ ike. Echeghị m na ọ dịkarịa ala n'okwu ya mara na onye ọzọ dere okwu ahụ. M ka kwere na ha bụ nke ya. Echere m na nke ahụ bụ ihe ezigbo ọdịnaya dere na-eme… na ha na-enwe ike weghara kachasi mkpa nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye na-eme ka mma ọrụ na-ekere òkè ha. Naanị oge ọ na-abụghị ezigbo bụ mgbe ị na-adịghị n'ezie kwere ihe ha kwuru ma ọ bụ na ha na-ịgha ụgha ị… ma nke ahụ bụ ọrụ dịịrị gị iji hụ na ọ naghị eme! Great post, Jenn!
Dec 7, 2011 na 1:38 PM
Enweela m na ntanetị gị ma nwee mmasị na nsonaazụ gị dị ka onye na-ede blọgụ maka òtù ndị ọzọ! O juru m anya na ọtụtụ ndị agaghị atụle ịkwụ ụgwọ maka ọdịnaya, ikekwe ha na-eche echiche banyere onwe ha karịa blọọgụ ụlọ ọrụ.
Olileanya n’etiti anyị ka anyị nwere ike ime ka ndị mmadụ kwenye na ọ dị mma, na ọ bụ ezigbo echiche dị mma, iji mee ka onye ọzọ dee blog gị maka gị!
Ana m atụ anya iso posts gị.
Dec 7, 2011 na 4:14 PM
Daalụ maka okwu gị, Sally! O juru m anya na ọtụtụ ndị anaghị eguzogide ọgwụ na mpụga ọdịnaya nyere mkparịta ụka m nwere na afọ gara aga ma ọ bụ karịa. Dịka onye na - ede blọgụ nke onwe, agaghị m ewepụta ọdịnaya maka blọgụ nke aka m (naanị maka na ọ ga - akara m mma iwepụta oge iji mepụta ọdịnaya ahụ), mana maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ blọọgụ azụmahịa, anaghị m ahụ nsogbu ọ bụla na ya. M n'ezie na-akwado ya.
Dịkwa ka Doug kwuru, enwere ọtụtụ ihe atụ ụwa n'ezie ebe ndị na-ede kọọpị nọ n'azụ. Ọ bụrụ n ’ọ dị mma na ndị ahụ, gịnị kpatara na ị gaghị adị mma na nke a? Daalụ ọzọ!
Ọkt 12, 2016 na 10:41 AM
Ọ bụ ezie na nke a bụ ọkwa ochie, achọpụtara m na m ga-agbanye aka na agbanyeghị. Ekwenyere m kpamkpam na ịzụta ọdịnaya site na mpụga. Kemgbe ọtụtụ afọ, m wuru otu ọmarịcha ndị otu ederede ederede nke m nwere ike ịdabere na ya maka ọdịnaya pụrụ iche. Mana mgbe ha buru ibu, m ga-eji isi mmalite ọdịnaya dị na mpụga bulie slack! Nsogbu a bụ ịchọta ebe ịzụta ọdịnaya m chere na ọ dabara na ụkpụrụ m n'ihi na m bụ njikwa njikwa ọdịnaya! Ejiri m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi mmalite niile ị nwere ike iche ma tụfuo ọtụtụ n'ime ha n'akụkụ dị iche iche. Maka afọ gara aga, ebiziri m na LPA (LowPriceArticles.com). LPA bụ akara kacha mma maka ego m nwere ike ịchọta. Ndenye ntụgharị na iwu m na ogo dị oke mma maka ọnụahịa ahụ. Ana m enye iwu ihe omume 200 kwa ọnwa site n'aka ha ma naanị m ga-ezigharị ole na ole maka nyocha. You ga - enweta ụdị edemede edemede sitere na ha? Nope. Mana maka ihe m chọrọ, ọ na-arụrụ m ọrụ.